Ungandibatsira here kuti ndinzwisise Amazon shanduro ye algorithm?
Amazon ranking algorithm for product search (inozivikanwawo seA9) yakagadzirirwa kuronga zvinhu zvakasiyana-siyana kuitira kuti kana mutengi achienda kunotsvaka chimwe chinhu chiri kutengesa - mitsva yekutsvaga yakakonzerwa pamwe chete uye inowanikwa mumatanho maviri. Ita zvinyoronyoro, apo mutengi angangotanga achitsvaga chigadzirwa chekugadzira, Amazon shanduro ye algorithm iri kuita zvakanakisisa kuedza kupa mhinduro dzakanakisisa dzinoenderana nekukumbira kwevatengi. Uye nepo Google ichiratidza mhinduro dzichipa mhinduro yakanakisisa pamubvunzo wekutsvaga wakapinda nemushandisi, Amazon shanduro yegorgorithm inonyanya kuratidza chaizvo izvo zvigadzirwa shopper zvinowanzozotenga. Zvinoreva kuti nzira yekugadzirisa mishonga paAmerica inonyatsojeka, kana ichienzaniswa nehutano hwakafanana hutorwa nehukuru hunjini dzakadai seGoogle pachayo, uyewo Yahoo, Bing, etc.
Zviitiko Zvikuru zveAmazonisitiri Algorithm
Zvakatorwawo, chinangwa chekutanga cheAmazon chakashandiswa kugadziriswa ndechekuita kuti mari yakawanda yevatengi vaitenge apo. Pakati pevamwe, Amazon search engine optimization iri kubheta pane zvakasiyana mukati mazvo - danabol depot. Ndiri kureva kuti hapana cheji-peji yakagadziriswa kuAmazoni - inongoripa haisi kutarisira chikamu chekugovana kwepeji peji SEO zvinhu, zvakadai senzanga yehupfumi, chivakwa chekubatanidza, chiremera chemasimba, nezvimwe zvakadaro. Sezvandatotaura kare, chinangwa chikuru cheAmazon chakashandurwa nehurongwa hwekugadzirisa zvinhu ndechekuwana mari yakawanda kubva kuRevenue Per Customer (RPC). Somugumisiro, nheyo dzepamusoro dzinofungidzirwa neA9 dzinotevera:
Mutengo Wokushandura - inowanzoendeswa nekuongorora kwevatengi, kukwikwidzana kwemari, uye chigadzirwa chemufananidzo wechigadzirwa.
Relevancy & Customer Satisfaction - nepo zvikonzero zvehutano zvinonyanya kugadziriswa nemusoro wechigadzirwa uye tsanangudzo yemagetsi, hutano hwakanaka hwekugutsikana kwevatengi hunowanikwa pakati pezvakakosha zvekukosha kupfuura apo.
Kuchengetwa - izvi zvinhu zvinowanzoenderana nehuwandu hweODR (kuronga kukanganisa kwechirwere), pamwe nemhinduro kubva kumutengesi.
Maererano neA9 Amazon ranking algorithm, purogiramu yakawanda inogona kuwanikwa kuburikidza nekuita kuti vatengi vakawanda vafare uye vachizvichengeta vachidzoka kuzotora imwe kutengesa ikoko. Cherechedza, zvisinei, izvo kunze kwepamusoro pePCC, Amazon inofunga kuti mutengi anochengetedza zvakare. Zvinoreva kuti kana ukaronga chimwe chigadzirwa, Amazon inoshandisa kwete chete mahedheni chaiwo ekutendeuka, asiwo mararamiro avo anotarisirwa. Zvichinyatsojeka, Amazon inogona kutarisira kuti inodonhedzwa pasi, ichipiwa kuti mutengo weimwe chigadzirwa unenge wakakwirira kudarika zvimwe zvose zvakagadzirwa zvinowanikwa pamusika. Uye yeuka, kukwana kweshizha rako rechigadziro uye chikamu chese chikuru chakange chakazadzwa zvakakwana chakakosha zvikuru kuAmazambique kushandiswa kwegorgorithm. Saka, iwe unofanirwa kudzivisa kuva nemunda umwe usina kuvhurika kana kuti usati wagumisa zvizere. Nenzira iyo, iwe nguva dzose unenge uine mikana iri nani yekuratidzwa pamusoro peSERP pane chikumbiro chezvinhu chakakodzera kubva kune shopper.